Qaraxyo Khasaare badan dhaliyay oo ka dhacay wadanka Burundi. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Aug 19, 2017 234 0
Wararka ka imaanaya dalka dhaca qaaradda Afrika ee Burundi islamarkaana kumanaan Askari ka joogaan Soomaaliya ayaa sheegaya in Xalay fiidkii Qaraxyo lagu weeraray Goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada Bujumbuura ee caasimadda wadankaas.
Saraakiil katirsan Booliiska oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in Rag aan heebtooda la aqoonsan ay Bambaanooyin ku tuureen Dad ku shaaheynayay afaafka hore ee Baarka, waxaana halkaas ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Ugu yaraan 4 Ruux ayaa lasoo warinayaa iney dhinteen, halka 29 kalena ay dhaawacmeen, waxaana dhaawacyada qaar xaaladoodu tahay mid liidata.
Ragga Weerarkan khasaaraha dhaliyay fuliyay ayaa goobta isaga baxsaday, illaa iyo hadana lama oga halka ay jaan iyo cirib dhigeen, waxaana Booliiska wadankaas uu wadaa baaritaanno lagu baadi goobayo dadka weerarkaas ka dambeeyay.
Illaa iyo hadda lama oga cida sida rasmiga ah uga dambeysa weerarkan oo noqonaya midkii ugu khasaaraha badnaa ee bilihii ugu dambeeyay ka dhaca dalka Burundi, waxaana dowladan dalka Soomaaliya ka jooga kumanaan Askari oo qeyb ka ah ciidamada Shisheeyaha ee AMISOM, kuwaas oo gumad iyo gabood fallo xanuun badan ku haya shacabka Soomaaliyeed.